गगन र विश्व प्रकाशले सुरु गरे पोखरामा यस्तो खेल, नेकपा एसले मेयर पाएपछि बागी उठाउने तयारी ! – Annapurna Post News
April 23, 2022 sujaLeaveaComment on गगन र विश्व प्रकाशले सुरु गरे पोखरामा यस्तो खेल, नेकपा एसले मेयर पाएपछि बागी उठाउने तयारी !
नेपाली काँग्रेस भित्र चुनावी तालमेलको बिरोध गर्दै आएको गगन थापा र विश्वप्रकाश पक्षका केहि नेताहरुले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाए पछि सिमा काटेरै बिरोध गर्न थालेका छन्।
पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भावना विपरित एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा मेयर दिने निर्णय भएकाले निर्णय नसच्याए महानगर मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिने सम्मको काँग्रेस पोखरा महानगर सचिव गणेशबहादुर थापाले चेतावनी दिए ।
पार्टीले पोखरा निर्णय नसच्याए भरतपुर काण्ड दोहोर्याउने थापाले चेतावनी दिए । ‘पार्टीले पोखरा मेयर एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेपछि जिल्ला पार्टी कार्यालय तालाबन्दी भयो । प्रदेश पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने तयारी गरेका छौ’ थापाले भने, ‘महानगरमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दिउँसो बैठक बोलाएका छौ । महानगरका ३३ वडाका नेताहरु आउनुहुन्छ ।
त्यहाँ पार्टी निर्णयका विषयमा छलफल हुने छ ।’ पार्टीको निर्णयले अग्रज नेताहरुले टाढा हुँदै जाने, पार्टीमा नयाँ आकर्षण नहुने स्थितिमा पुगेको थापाले बताए । सत्ता गठबन्धनले पोखरा मेयर एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय भएपछि पोखरा महानगर काँग्रेसका नेताहरुले एक विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका हुन् ।
पार्टी केन्द्रले पोखरा कमिटीसँग सल्लाह नै नगरेर एकोहरो एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गर्यो । नेता कार्यकर्ताको भावना विपरित निर्णय लिइयो’ थापाले भने, ‘पोखराको परिस्थिति नबुझेर कसैलाई फाइदा हुनेगरी महानगरलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी निर्णय भयो। त्यो गर्नु हुँदैन थियो । पार्टीले गरेको निर्णय जुनसुकै हालतमा सच्याउनुपर्छ। यदि पार्टीले पोखरा महानगरको निर्णय नसच्याउँदासम्म जिल्ला पार्टी कार्यालयको ताला नखोल्ने उनले बताए ।
काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी-पोखरा महानगरपालिका सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिएको विरोधमा नेपाली काँग्रेसले तालाबन्दी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलले भागवण्डा गर्दा पोखरा एकीकृत समाजवादीलाई दिएपछि जिल्ला काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो ।काँग्रेस पोखरा उपमहानगरपालिका कमिटीका सचिव टुकराज बास्तोला र गणेशबहादुर थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काँग्रेस नेता कार्यकर्ताको अपमान हुनेगरी एकीकृत समाजवादीलाई दिएको भन्दै निर्णय नसच्याएसम्म ताल नखोल्ने बताएका छन् । यस्तै पोखरा महानगर पालिका कमिटीले पार्टीको गणकी प्रदेश कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेर सत्ता गठबन्धनको निर्णय सच्याउन दबाब दिने तयारी गरेको छ ।